Cloudgwé ojii Kọmputa: Ihe niile dịka Ọrụ - XaaS | Site na Linux
The Software kemgbe e kere eke e ndammana kere 3 edemede nke bụ: Sistemụ, Mmemme na Ngwa. Nke ikpeazu, n'aka nke ya, ji nke nta nke nta malite Ngwa: Nwa afọ, Weebụ, ngwakọ, Na-aga n'ihu ma Kesaa.
Yana Ngwa abanyela na Cloud (Internet) Ọ gafeela na-agbakọ echiche ma ọ bụ ọrụ na ụdị azụmahịa a maara dị ka "Ihe niile dị ka ọrụ", nke akacha mara aha ya na acronym na bekee dika: Ihe ọ bụla dịka Ọrụ ma ọ bụ Ihe niile dịka Ọrụ (XaaS).
1 Ele ihe ugbu a
1.2 Ntughari na Hyperconggence
2 Njikọ Concepts
2.2 Software dị ka Ọrụ (SaaS, Software dị ka Ọrụ)
2.3 Nweta dị ka Ọrụ (PaaS)
2.4 Akụrụngwa dịka Ọrụ (IaaS, Akụrụngwa dịka Ọrụ)
XaaS bụ usoro ọhụụ maka ahịa igwe ojii igwe ojii na omume uto ya maka afọ ndị na-abịanụ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ngalaba Telecommunications, Big Data na Internet of Things (IoT).
Ebe ọ bụ XaaS bụ echiche teknụzụ nke gunyere ọtụtụ echiche metụtara teknụzụ ọhụụ na igwe ojii, nke na - eweputa uzo ohuru nke imeputa ma tinye uru na ndi otu, ma o bu nke oha na eze.
Ntughari na Hyperconggence
Na ya onwe ya, XaaS na-arụtụ aka na Ọrụ IT dị ọtụtụ ma na-eto eto nke Ndị na-ahazi na-enweta ugbu a na ntanetị na nnukwu mgbanwe nke a na-ewetara ha, ụdị azụmaahịa na ngbanwe na ntụgharị ikuku.
Ghọta dị ka IT na-ejikọta njikọ ma ọ bụ njikọ nke ọtụtụ echiche IT ma ọ bụ teknụzụ, nke ka ukwuu n’ime Kọmputa Center Infrastructures (Datacenters), dị ka: Nhazi, Nchekwa, Netwọk, Nkwukọrịta, n’otu ikpo okwu nkịtị (Chassis, Machine) ma ọ bụ Akụrụngwa.
Na olee otu Mgbanwe nke IT ka ihe akụrụngwa akọwapụtara na ngwanrọ nke na-ekewapu arụmọrụ nke akụrụngwa HW site na sistemụ ma gbanwee ha n'ogo nke Hypervisor na otu ngọngọ.
Usoro ohuru a nke «as-a-service» (dika-oru) bu uzo ahia, nke a na-eche na usoro nke Nhazi na ọrụ ha dịka ikpo okwu ọrụ. Usoro dị oke egwu dị n'ime usoro, njem, nsogbu ndị ọzọ ọ na-eche ihu. Nke a bụ ebe ụdị XaaS dị mma.
Ojiji nke ụdị XaaS na Organisation nwere uru nke ịkwalite mkpebi nke ihe isi ike na mpaghara IT, mgbe ị na-aga n'ihu na ọnọdụ ebe ha nwere ike ịbawanye ma gbasaa, na-enye gị ohere ịga ngwa ngwa site n'otu ahịa (niche) gaa na nke ọzọ na site na otu ụdị azụmaahịa gaa na nke ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ụdị XaaS na-enye ohere iji mee ngwa ngwa na ihu ihe ijuanya chọrọ, na-enyefe ihe nchịkwa, iji kwe ka ztù na-ahazi onwe ha raara onwe ha nye azụmahịa na uto ya, kama akụrụngwa.
XaaS bụ ụdị azụmaahịa zuru ebe niile, na-enye igwe ojii gburugburu ụwa site na iji igwe ojii. Ike na isi ihe dị mkpa nke akụrụngwa IT na-eme ka ọ ghara ịsụ ngọngọ maka uto na mgbanwe azụmaahịa.
E nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke echiche, usoro ma ọ bụ teknụzụ metụtara paradigm nke "as-a-service" (as-a-service). Nke ahụ bụ, ọ bụ ezie na XaaS kachasị ewu ewu na-abụkarị: Software dị ka Ọrụ (SaaS, Software dị ka Ọrụ), Platform dị ka Ọrụ (PaaS, Platform dị ka Ọrụ) na Akụrụngwa dị ka Ọrụ (IaaS, Akụrụngwa dị ka Ọrụ), oge ọ bụla ụdị ndị ọzọ na-apụta, n'etiti nke anyị nwere ike ịchọta ndị na-esonụ:
Akụrụngwa dịka Ọrụ (HaaS, Akụrụngwa dịka Ọrụ)
Nchekwa dị ka Ọrụ (SaaS)
Ebe nchekwa dị ka Ọrụ (DBaaS, DataBase dị ka Ọrụ)
Mgbake Ọdachi dịka Ọrụ (DRaaS)
Nkwukọrịta dị ka Ọrụ (CaaS)
Netwọk dị ka Ọrụ (NaaS)
Nlekota oru dika oru (MaaS)
Banyere dị ka Ọrụ (CaaS, Containers dị ka Ọrụ)
Ọrụ dị ka Ọrụ (FaaS, Ọrụ dị ka Ọrụ)
Nche dị ka Ọrụ (SECaaS, Nche dị ka Ọrụ)
Ndị ọzọ amachaghị ma ọ bụ tinye n'ọrụ na-abụkarị:
Nchịkwa dị ka Ọrụ (MaaS)
Business dị ka Ọrụ (BaaS, Azụmaahịa dịka Ọrụ)
Na nchịkọta na-achịkọta isi okwu atọ ma ọ bụ ụdị XaaS nwere ike ịkọwa dị ka:
Software dị ka Ọrụ (SaaS, Software dị ka Ọrụ)
Mgbe onye na-eweta ọrụ na-enye ngwa ndị na-agba ọsọ na igwe ojii na onye ahịa ahụ nwere ike ịnweta ya site na ngwaọrụ dị iche iche, yana ihu dị mfe (dị ka ihe nchọgharị weebụ) ma ọ bụ site na ihu (API). Nke ahụ bụ, ọ na-ejikwa ngwa na ihe ndị ọzọ na-akpata (Network, Servers, Operating Systems, Nchekwa, na ndị ọzọ).
Platform dị ka Ọrụ (PaaS, Platform dị ka Ọrụ)
Mgbe onye na-eweta ọrụ nyere gị ohere itinye ngwa nke ya ma ọ bụ nke ndị ahịa ya na igwe ojii ya, mgbe onye ahịa ahụ na-achịkwa ha. Ndị na-eweta ọrụ ahụ na-elekọta njikwa akụ ndị ọzọ niile.
Akụrụngwa dịka Ọrụ (IaaS, Akụrụngwa dịka Ọrụ)
Mgbe onye na-eweta ọrụ na-enye nhazi, nchekwa, netwọkụ na ihe ndị ọzọ na-enye Mgbakọ kọmpụta nke onye ahịa nwere ike ime ma rụọ ọrụ sistemụ arụmọrụ, nchekwa na ngwa.
Site na nke a niile, o doro anyị anya na "Ihe niile dịka Ọrụ" na-eweta mgbanwe (Mbugharị) nke arụmọrụ IT nke Ndị na-ahazi na igwe ojii (Intanet) site na nyiwe mmekorita, nke enwere ike inweta site na ebe obula, ya na ngbata onu ogugu oru na nhazi usoro.
Na nke ahụ, na ụdị XaaS nke dabere na IaaS, PaaS na SaaS na-agbasawanye, na-agbasawanye n'akụkụ ụdị ihe niile nwere ike ịnye dị ka ọrụ. XaaS na-agbatị uru nke Cloud Computing na mpaghara ọ bụla ma ọ bụ usoro nke Ndị na-ahazi, na-akwado ebumnuche azụmahịa dị iche iche, site na Ọrụ Ndị Ọrụ, na Omenala ma ọ bụ Nchebe Ozi.
Na nkenke, XaaS na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere na ọrụ ọ bụla na mpaghara IT na-ejedebe n'igwe ojii, nke ga-eme ka ọ dịkwuo ike karị ka oge na-aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » XaaS: Cloudgwé ojii Kọmputa - Ihe niile dịka Ọrụ
E wepụtala ọhụụ nke Google Chrome na Chromium 74
Gnome Encfs Manager bu ezigbo ihe oru iji zoo faịlụ gi